ISIKRISTALI ESIMNYAMA ESIYINENE MALUNGA NOKUCINYWA KWAYO, YONKE INTO EKUFUNEKA UYAZI - IINKQUBO ZETV
Isikristali esimnyama esiyiNene malunga nokuCinywa kwayo, yonke into ekufuneka uyazi
I-Crystal emnyama: Ubudala bokumelana, iphumelele izigidi zeentliziyo ngaphandle kwexesha layo elinye emoyeni. Olu luhlu lwalukhona
I-Crystal emnyama: Ubudala bokumelana , iphumelele izigidi zeentliziyo ngaphandle kwexesha layo elinye emoyeni. Olu luhlu lwaluyinto ehamba phambili ukuya kuthi ga ngo-1982, kwimovie kaJim Henson. Ifilimu iyanconywa kakhulu ngendlela yayo entsha. Nangona kunjalo kwathatha iminyaka engamashumi amane ukubuyela kwiscreen. Kwaye ngoku kubonakala ngathi ukulinda kuya kuqala kwakhona.
Isizathu soku kurhoxiswa ngesiquphe kothotho ngeNetflix. Kwaye bekulungele ukuthatha iSkeksis. Ngelishwa, abasayi kuphinda bafumane ithuba. Kuyaqondakala ukuba abalandeli baphelelwe lithemba kulandela isibhengezo, abaninzi bezibuza esona sizathu sokurhoxiswa komboniso.
ICrystal emnyama: Isizathu sokuCinywa kwayo?
Ubudala bokumelana buqale kwi-Netflix njenge-prequel ka-1982 i-Dark Crystal. Inkulumbuso kwi-2019, umboniso ujolise ekuqhubekekeni nokuphonononga umhlaba weTra. Kwaye kuhamba ngexesha lokuphendula elifunyenweyo, abalandeli babonakala bewuthanda umboniso. Kolu ngcelele lude lube ne-Emmy. Oko kwenza esi sibhengezo, kusuku nje emva kokuphumelela ibhaso, okumangalisa ngakumbi.
Ukurhoxiswa Umboniso ubonakalisa ukuba sisiphelo sezizathu ezininzi, olona xinzelelo luluhlahlo-lwabiwo mali. Umboniso wawuneliso lenkcukacha kwaye wayegxekwa ngumbono weCGI. Oko kwakuthetha ukusebenzisa amakhulu oonopopi, iseti emininzi kunye noonodoli. Ukongeza kuyo imfuneko enkulu yemveliso, kuboniswa umfanekiso ocacileyo. INetflix ibingazimiselanga ukukhulula ababukeli balo mboniso. Kodwa akufuneki ibininzi, kuthathelwa ingqalelo isigqibo esomeleleyo kubo. Ekugqibeleni umboniso ubonakalise umngcipheko omkhulu kakhulu.
Nangona kunjalo, uqhawulo mtshato phakathi kwabenzi bemiboniso kunye neNetflix lube luhlobo. NgeNetflix ekhupha le ngxelo ilandelayo- Sinombulelo kumagcisa aphambili kwiNkampani kaJim Henson ngokuzisa i-Crystal emnyama: Ubudala bokumelana nobomi kubalandeli kwihlabathi liphela. Nangona kunjalo, abalandeli baya konwaba malunga nezimvo zikaLisa Henson. Ngokuqinisekisa kwakhe abalandeli ukuba baqhubeke nebali kwikamva. Kanye xa oko kunokuba kakhulu kumnyama.
ICrystal emnyama: Ibingantoni?
Uthotho uthathe inkuthazo enkulu kwibali lefilimu yoqobo. Ewe kunjalo, ibimalunga noJen ezama ukubuyisela ibhalansi kwihlabathi lakhe ngokucaphukisa uSkeksis. Ukuze enze njalo, kwafuneka abuyisele amandla kwiCrystal enamandla. Umsebenzi wawungekho lula, kwaye iihambo zakhe zazisonwabisa. Kwangolo hlobo lunye, iRian, iBrea, kunye noDeet bafumanisa iimfihlo zeSkeksis. Bayaluqonda usongelo kwaye bafuna ukudibanisa iiGelflings kwimvukelo.
Ngokuqinisekileyo ibali linokuninzi kakhulu ekunokubonelelwa ngalo. Nabalandeli baphelele ebalini, ngakumbi ilizwe le-surreal yeTra. Kodwa ke, kuyakufuneka ulinde ngoku. Ngexesha lesibini lomboniso urhoxisiwe, kunokuba yinto enye elinde ixesha elide ukuba ibali libuye. Nangona ingxelo kaLisa ibonakala inethemba kakhulu, abalandeli bakhathazeke ngokunyanisekileyo ngekamva lothotho.
Ixesha leCarnival Row 2- Ngaba eli xesha lonyaka lihlaziyiwe? Abalinganiswa abakuluhlu lwee-odolo, yonke into onokuthi uyiphose, isilindelo esilindelweyo
Isondo leMfundo yezeSondo 2 ibuyile kwiNetflix ngeLot Suspense, Plot, New Cast, Spoiler esaziwayo
Abaguquli 7 ngokutsha [NGOKUHLAZIYA], ithiyori, uCebo, isiQendu, iiTrailer, Sinazo zonke iinkcukacha zaKho
UMiley Cyrus ufumene i-Edgy Version yeRachel Haircut
U-Godzilla vs Kong u-King of Skull Crusher Air Date, uMboniso oVuzayo oBonisa u-Godzilla Mkhulu kuneKing Kong, eNtsha [i-CAST], ezinokwenzeka.
U-Selena Gomez kunye no-Taylor Swift bayingcaciso yeeNjongo ze-BFF kwii-American Music Awards zika-2019
I-Deadpool 3 Yonke inkcukacha kunye nabaphangi omele uyazi
Ixesha leMvula i-3 Rumor kwiNew Danish Series Premiere Date, Iinkcukacha zePlothi kunye neCast
Umhla wokuKhutshwa okungapheliyo, i-Cast, i-Plot, iTrailer kunye nokunye okuninzi malunga nomxholo webali?
Umxhuzulane uwela ixesha lesi-5
Ixesha le-condor 2 yokukhutshwa komhla
Ukukhutshwa komhla wokukhutshwa kwenetflix
Izinto ezixineneyo zonyaka 4
I-twilight saga ezinzulwini zobusuku umhla wokukhutshwa kwelanga
Liza kuphuma nini ixesha lesi-5 lezono ezisixhenxe ezibulalayo kwi-netflix
Copyright ©2021 Onke Amalungelo Agciniwe | jf-aguia.com | Umthetho Wabucala